Hordoftoota Oromia News Network-ONN fi uummata.. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHordoftoota Oromia News Network-ONN fi uummata..
Hordoftoota Oromia News Network-ONN fi uummata Oromoo maraaf
Obsaa fi tattaaffii yeroo dheeraatiin booda miidiyaan keessan Oromia News Network_ONN biyya isaa Oromiyaa keessatti hojii isaa sirnaan hojjachuuf seera ykn ayyama guutuu argatee jira. Waan taheef baga gammanne baga gammaddan jechaa miidiyaa keessan kana caqasuudhaan gabaasa garaagaraa dhimmoota qabsoo Oromoo fi dhimoota Oromoo mara kan ilaalu erguufiin cinatti miidiyaa kana gama dandeessaniin akka tumsitan kabajaan isin gaafanna. Wal biratti nu haa itichu!
Kun bu’aa qabsoo dha. Baga gammaddan warri Oromia News Network – ONN. Warri caqasnus miidiyaan yeroo nuuf heddummatu filannoo arganna.
Ergan gammachuu kiyya ibseen booda dhugaa hadhooftuu lamaan sadan yoo dides isaa ol lafa kaa’a.
✍️Sagantaa Natoo (kan torban sadii) hin odeessiinaa irra deddeebitanii
✍️Facebook keessan irratti namoota hoogganan (Admins) ijoollee qaxalee Qubee sirreechitee barreessitu kaa’aa
✍️Madda oduu keessanii seeraan beekaa
✍️Fuula Facebook nama dhuunfaa Facebook keessan irratti hin hiriinaa
✍️Namoota argaa miti sagalee isaanii raadiyoon dhaga’uuf hin tolletti sagantaa qopheessi jettanii hin laatiinaa
✍️Warri sagantaa qopheessitan of hin tuuliinaa. Bokoktanii jaldeessa birraa hin fakkaatiinaa
✍️Yeroo namni ykn dhaabbatni tokko rakkootu jira koottu gabaasi jedhu dafaa dhaqaa waraabaa. Yoo tamsaasuun hin barbaachifne “archive” godhaa kaa’aa
✍️Hoogganaa bilchaataa qabaadhaa. Dargaggeessa fi qancara bilchaataa
✍️Nama dubbiftan (interview) gootan qotaa baasaa dhiyeessaa
✍️Qeeqa fudhadhaa. Hin boo’iinaa yeroo qeeqamtan.
✍️Miidiyaalee kanneen biyya keessa jiran dorgomaa caalaa